Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. गोरखा फुजेलका अधिकारीको हत्या आरोपी छविलालद्वारा अदालतमा आत्मसमर्पण – Emountain TV
गोरखा फुजेलका अधिकारीको हत्या आरोपी छविलालद्वारा अदालतमा आत्मसमर्पण
काठमाडौं, २४ असार । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपी छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
आइतवार सर्बाेच्च अदालतमा हाजिर भए लगत्तै पौडेललाई डिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोप लागेका पौडेललाई चितवन जिल्ला अदालतले २०७१ बैशाखमा धरौटीमा छाडेको थियो ।
तर, पुनरावेदन अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले २०७२ पुष ६ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कानुन बमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो ।
लामो समयसम्म सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि मृतक कृष्णप्रसादकी आमा गंगामाया अधिकारी गत जेठ १५ गतेदेखी वीर अस्पतालमा आमरण अनशन बसिरहेकी छिन् ।
यसअघि अनशनकै क्रममा उनका श्रीमान् नन्दप्रसादको निधन भइसकेको छ । गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
आइतबार, २४ असार २०७५